Site na nsogbu dermatological, ee, ọ dịghị onye na-enweghịzi. Ọgwụ na nje bacteria na-adị ndụ n'ebe niile, gụnyere n'ime ahụ mmadụ. N'ịbụ ndị na-anakwere, ha anaghị etinye aka na ahụ ike. Mana ihe dị iche iche nwere ike inye aka na mmepụta nwa ha: nrụgide, ọrịa, mmeri. Cynovitis gel bụ ọgwụgwọ nke na-alụ ọgụ dị iche iche na nsogbu dermatological.
Ntuziaka maka iji ude gel Czinovit
Cynovitis bụ ọgwụgwọ nke oge a nke kwesịrị ekwesị maka anụ ahụ, na-ata ahụhụ site na ọrịa ọrịa dermatological. Nri-gel Cinovite bụ ezigbo antiseptik nwere mmetụta dị ịrịba ama na-egbu egbu. N'ihi oru ya dị nro ma dị irè, ihe ngwọta a bara uru ma ahụ ma ihu. Otu n'ime uru ndị kachasị mma nke Tsinovit nwere ike nyochaa ya nwere ike ịnweta, ya na ezigbo mma.
Gel Tsinovit bụ maka nsogbu ndị dị otú ahụ:
ewepụ ndị ọzọ.
Gel Cinovit na-enyekwa aka imeri ọkụ ọkụ dị iche iche, na-ebelata ihe mgbu ma na-enye aka n'ịgwọ ọrịa. Cynovitis nwere ike ịhazi maka iwepụ akwụkwọ mgbe ụmụ ahụhụ na-ata.
Gel na-eji nwayọ eme ihe, ọ naghị ekpuchi akpụkpọ ahụ. Ma mmetụta nke iji ya nwere ike ịhụ mgbe ọtụtụ usoro.
Uru na ojiji nke ịsa mmiri Czinovit
Ihe mejupụtara nke Cynovitis nwere ọtụtụ ihe ngwọta. Ha na-alụso ọgụ na nje bacteria n'ụzọ dị irè. A na-ejikarị gel Cinovit mee ihe dị ka ụzọ maka ịsa. Ihe niile n'ihi na ngwọta ọ bụghị nanị na-agwọ nsogbu akpụkpọ anụ, kama ọ na-ehichapụkwa ntụpọ ntụpọ ndị a kpọrọ asị karịa ka ọ bụla ọkpụkpụ na ihe ọkpụkpụ pụrụ iche.
Jiri Cinovit dị mfe. Iji mee ka ọgwụ dịkwuo elu, ọ ga-etinye ya n'ọrụ na akpụkpọ anụ Izu ole na ole ejidela, ọ bụghị iwepụ. Ọ bụrụ na a na-eji gel ihu maka ọgwụgwọ, ijikọta ya na ngwaahịa ndị ọzọ dị mma adịghị atụ aro ya. Maka nlekọta mgbochi ịsa ahụ ma saa ya na Tsinovit naanị otu ugboro n'izu.
Site n'ụzọ, a na-atụ aro ka ị tinye gel maka ọgwụ mgbochi ọbụna ndị na-enweghị nsogbu akpụkpọ anụ. Gel Tsinovit na-echebe megide akpụkpọ ụkwụ na ihe otutu , dochie peeling na itching. Ngwọta ahụ na-eme ka akpụkpọ ahụ ghara ịdaba na mmetụta ọjọọ nke gburugburu ebe obibi, si otú a gbochie ọdịdị nke ọtụtụ nsogbu.
Imecha ihu na ụlọ
Gel maka whitening ezé
Ụfụfụ Japanese maka ịsa
Ezi ntọala ntọala
Kedu ka esi etinye ihe ọkụ maka ihu?
Nri aka maka ezigbo akpụkpọ anụ
Nri maka mmanu mmanu na nsogbu akpụkpọ anụ
Isiokwu na enyo
Mmiri ozuzo nke ụmụ nwanyị na akwa
Kwa izu malitere otu izu gara aga
Megan Markle mbụ gwara ndị Fans banyere akwụkwọ ya na Prince Harry
Ọ bụ n'afọ ime mgbe ọ dị afọ iri na ụma
Ihe ọṅụṅụ si n'oké osimiri buckthorn dị mma, nsogbu na ntụziaka kachasị mma nke ihe ọṅụṅụ na-atọ ụtọ
Ojiri anya Zovirax
Ozizi na-ekwu okwu
Akwukwo nri na anụ
Mmiri mbụ ahụ bụ ihe ịrịba ama
Akuku aji maka oyi
Akụkụ nke ụlọ